Muta ihe na 3 = Nnukwu ihe mkpofu na eriri - CM
+ 1 800-848-1071 Nweta ọnọdụ
Ngwa ngwá agha
Akụkụ & Ọrụ
Nta ihe omimi 3 = Ọkpụkpụ na eriri na-ewepụ Ntugharị 101
Agba nke 3: Mwepu Granulation & Fiber
Nkeji nke 3 - Granulation
Granulator nwere ike ịnakwere 6-19 mm [1 / 4 "- 3 / 4"] na-eme ka ọ ghara ịchọta ya na 1-4 mm [10 - 20 mesh]. N'oge a, a na-eji ákwà nhacha ihe a na-eji eme ihe na usoro ikuku iji wepụ eriri nylon ahụ.
Site na Ngwaahịa: Ngwunye ihe na-edozi ahụ
MGBE AHỤ AHỤ AHỤ
ỤBỤRỤ ECHICHE ECHICHE
Infield Turf maka Ugbo Ogwu
A na-etinye ihe ndị na-edozi ahụ n'ime etiti ahịhịa. A na-eji bọl, baseball na football football n'ụwa nile.
uru: Nfụcha maka ọdịda, na-adịru ogologo oge, obere nrụzi karịa ubi ahịhịa, na-agba ngwa ngwa maka drier, na-ekpuchi elu.
Wụ na Ebe Ebe
Ejiri maka egwu na-agba ọsọ, teepu rubber, wụsa na ebe, ebe osisi, na anụ anụmanụ.
uru: Ezigbo ụgbọ mmiri, ogologo oge, nwere ike ịcha acha, nke na-adịchaghị ala, nke na-adịgide adịgide, nke dị nro maka ndị na-eme egwuregwu, na-amanye njem ma daa.
Ngwa a kpụrụ akpụ
uru: Ezigbo ụgbọ mmiri, ogologo oge, nwere ike ịcha agba, obere mmezi, na-adịgide adịgide, dị nro maka ndị na-eme egwuregwu, na-ewebata njem ma daa.
Akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ maka ihe eji eme ihe na 3
• Mbadamba ụrọ nke elu igwe na stoner
• Ihuenyo ọtụtụ enyo maka ihe onwunwe
• Drum magnet
• Ndị na-emegharị ihe
Ihe Nlekọta 3
Usoro nke 1 Equipment + Ntọala 2 Equipment + CM Granulator,
Mbadamba ụrọ nke elu igwe / detoner, ihuenyo deck multi na magnet drum
1-4 mm crumb roba maka Infield Turf, Wunye N'akụkụ Ebe na Ekpụzi Ngwa Ngwa
Isiokwu & Mgbasa Ozi
Mụọ ihe na 1 = Ncha
N'uji omuma 2 = Nwepu - Nwepu nke nchara
N'uji ihe omuma 3 = Mwepu nke isi na mbu
Nta ihe omuma 4 = Nyocha ikpeazụ na nyocha
Kedu ihe a na-atụfu Taya
Glossary & Okwu
Ihe eji eme mma na Patented
Teta Na-ehichapụ 101
Ihe mkpuchi gburugburu maka gburugburu gburugburu 250,000 Ton Milestone
CM Shredders & Waste Eco Team Team Up To Turn Waste into Energy in Mexico
CM Shredders na-ewebata “SOLO” ọhụrụ nke usoro eji alụ ọgụ
A na - eji nganga eme ihe eji eme CM CM Shredders & CM Industrial Shredders na USA n'ụlọ ọrụ anyị na Sarasota, Florida
Akara Bengal Machine
Isi ụlọ ọrụ: + 1 941.755.2621
Ọrụ Ahịa: + 1 941.753.2815
Teknụzụ na-agba mmanụ na ihe ọhụrụ maka taa ma gafere, CM Shredders adịla mbụ n'egwuregwu mgbanwe mgbanwe egwuregwu. Sistemụ na usoro mkpogharị nke CM na-agbasi mbọ ike n'ọtụtụ narị ebe dịruru anya na kọntinent 5 karịa mba 28 ma na-edozi ihe karịrị ọkara ijeri taya taa kwa afọ n'ụwa niile.
CM Shredders na-eji mbelata, teknụzụ ejiri eme nke ọma nke anwalela ma zuo oke n'ụwa nke na-achọ taya igwe. CM Shredders nwere aha toro ogologo nke ịbụ ihe kachasị adịgide, ntụkwasị obi na akụrụngwa kachasị elu na ụlọ ọrụ.
Na Disemba 28, e nwetara 2018 CM ma sonye na ezinụlọ Bengal Machine nke ụlọ ọrụ mbelata nha, nke gụnyere ụlọ ọrụ nwanne ya nwanyị, Schutte Hammermill, onye nrụpụta ụlọ ọrụ na New York nke mepụtara usoro dị ukwuu nke nbelata nha nke gụnyere igwe mịrị, akpụ. ndị na-eti ihe, igwe nkụ, na igwe ihe ndị na-eweta ururu akụkụ zuru ezu.
Koodu Nzipu ozi*
Kedu ihe bụ ngwa gị?*
Kedu ụdị taya ị chọrọ hazie*
Kedu ụdị ngwaahịa ngwaahịa ikpeazụ achọrọ*
Kedu ihe achọrọ nhazi gị na (Taị kwa awa) ma ọ bụ (Tọn kwa elekere)*
Kedu ihe ị chọrọ hazie*
Kedu ihe nhazi nhazi gị kwa elekere*
Industrial 2020 Shredders Industrial. Ikike niile echekwabara.